Umadda Somliland waa waxgarad xog-ogaal ah W/Q Abdirizak Ahmed Jama | Berberatoday.com
Umadda Somliland waa waxgarad xog-ogaal ah W/Q Abdirizak Ahmed Jama
April 26, 2018 - Written by Berbera Today
Qoraalkani wuxuu shaaca ka qaadayaa dareenka dhabta ee umadda Somliland wakhtigan. Iyadoo ay adag tahay, in safxad qudha lagu soo koobo heshiiskan yaabka leh ee Somaliland la gashay D.P World iyo dawladda Imaraadka oo wada jira, waxay umaddu Qoraalkan si kooban isu dul taagi doontaa dawladda Somaliland, xisbiyada mucaariidka ah ee Somaliland, dawladda Isutaga Imaaraadka Carabta iyo dawladda federaalk ee Somaliya oo ay intooduba ku hawlan yihiin heshiiskan.
Dawladda Somaliland ee wakhtigan: Heshiiska aad la gasheen D.P World iyo dawladda Isutaga Imaardka, wuxuu idiin fuli karaa idinkoo mugdiga ka saara oo miiska soo dhiga qodobada dhabta ah ee uu heshiisku ka kooban yahay. Aduunka laguma arag wadan golayaashiisu qaran ansixiyaan wax aad ugu yeedheen (nuxur heshiis). Umadda garaadkooda in la caayo marna ma haboona. Siyaasadda hogaamineed ee dhaxalka wacan reebtaa, in aad dadkaaga kugu aaminay talada, kuguna dhaariyey, aad runta ka qariso, ma aha, in anigaa tan la ii doortay oo waxaan doonaan yeeli, ma aha. Waxaad ku khamaarteen oo miiska dul dhigteen ishii dhaqaale ee kali ahayd ee Somaliland lahayd wakhtigan. Waxaynu ognahay in ayna umaddu idinku raacsanayn, aadna u saluugsan tahay sida liitata ee aad u baayactanteen oo ay ka muuqato deg deg, aqoondaro iyo cad quudheed aad ku qanacdeen. Mar hadii ay sidaa garasho idinka noqotay, waxay umaddu idiinka fadhidaa heshiiskaa dhinaca ka raran in aad ugu bedeshaan ictiraaf buuxa marka ay ugu yaraato. Wixii ictiraaf ka yar umaddu waxay u aragtaa in xukuumaddu ka hiilisay ummaddii talada u dhiibatay. Waana xisaab la hor dhigi doono xukuumadan maanta talada haysa. Dariiqyo la inoo dhiso iyo daaro ringi la inoo mariyo uma dhigmaan waxaynu ku bedelalayno dekada iyo saldhiga Berbera. Waa in miiska gorgortanka aad dul dhigtaan ictiraaf, si ay umaddu u liqdo heshiisyadan. Umadda reer Somaliland waxay si buuxda idiinku taageeraysaa go’aankii uu madaxwayne Somaliand cod dheer ugu gudbiyey dawladda federaalka ee Soomaliya in aynu la qaadanay dagaalka ay iyagu iclaamiyeen. Madaxwayne waxay umadda Somaliland kaaga fahdidaa in aad ka dhabayso dagaalkaa aad qaadatay adigoo si rasmi ah u joojinaya wxii loogu yeedhi jiray wada hadalada Somaliland iyo Somaliya. Madaxwayne waxay umaddu ku faraysaa in aad xuduuda wadanka aad soo xidho sidii aad hore ugu balan qaaday, adigoo aan dheg jelaq u siinayn waxaa ay kuula iman doonaan hay’adaha UN-ka, kuwa reer Yurub isku sheega, Kuwa Africa iyo wixii la mid ah. Somaliland aayaheeda inay u taliso iyadaa leh. Waxaa umadda u muuqata in ay wakhtigan ugu haboon tahay in la soo xidho xuduuda wadanka. Ruqaansi marba meel wadanka dhexdiisa ah ciidamada Somaliland lagu lugooyo, wakhtigeeda wuu dhamaaday.